SPORTS Archives - TheeSayChin
Twitter / Mirror လီဗာပူးလ် ။ ။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလား ပြန်ကန်ပွဲစဉ်မှာ ရှရူးဘူရီအသင်းကို (၁-ဝ)နဲ့ အနိုင်ယူပြီး နောက်တစ်ဆင့် တက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်ကစားသမားတွေကိုသာ ပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အန်ဖီးလ်မှာ ကစားခဲ့ရပေမယ့် ဂိုးရဖို့တော့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ပွဲချိန် (၇၅)မိနစ်မှာ ရှရူးဘူရီနောက်ခံလူ ဝီလီယံက ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းခဲ့လို့ လီဗာပူးလ်တို့ နိုင်ပွဲရသွားခဲ့တာပါ။ လီဗာပူးလ်ဟာ FA ဖလား ပဉ္စမအဆင့်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟယ်ရီကိန်း ။ ။ စပါးအသင်းနည်းပြမော်ရင်ဟို က အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းဟာ ရာသီကုန်ဆုံးခါနီးအချိန်မှာ အသင်းအတွက် ပြန်လည်ကစားပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ တံကောက်ကြောဒဏ်ရာကို ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူုခဲ့တဲ့ ဟယ်ရီကိန်းဟာ အင်္ဂလန်ရဲ့ယူရို (၂၀၂၀)ပွဲစဉ်တွေကို လွဲချော်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ […]
Twitter / Mirror ဒီမာရီယာ ။ ။ မန်ယူအသင်းရဲ့ ကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီမာရီယာ က သူ့အနေနဲ့ မန်ယူအသင်းမှာ ကျောနံပတ်(၇) ဝတ်ဆင်ခဲ့ရခြင်းဟာ တာဝန်ရှိသူတွေ ပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူ့အနေနဲ့ ရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းမှာ ကျောနံပတ်(၇)ဂျာစီ ဝတ်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ဒီမာရီယာရဲ့ ခြေစွမ်းက ထိုက်တန်ခြင်းမရှိဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးနေကြတဲ့အပေါ် ဒီမာရီယာက တုန့်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီး သူက တခြားနံပတ်တစ်ခုနဲ့ ပိုပြီး သင့်တော်သူသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။ Di Maria: Man Utd gave me the No.7 shirt… I didn’t haveachoice! #sport https://t.co/YU6TnCoGb8 — Prime Sky (@PrimeSky2) […]
Twitter / Goal ဂျာအိုဖိလစ် ။ ။ အက်သလက်တီကိုအသင်းမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ဂျာအိုဖိလစ် ဟာ အသင်းရွေးချယ်မှု မှားယွင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရီးယဲလ်ကစားသမားဟောင်း ဗန်ဒါဗတ်က မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အက်သလက်တီကိုအသင်းဆီကို ပေါင်(၁၁၃)သန်းနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ ဖိလစ် ဟာ နည်းပြ ဆီမြွန်နီ ရဲ့လက်အောက်မှာ ပုံစံကောင်းပြနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ ဗန်ဒါဗတ်က မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပြီး ဖိလစ် အနေနဲ့ သူနဲ့မသင့်တော်တဲ့နည်းပြတစ်ယောက်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်နေရတာလို့ သုံးသပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Van der Vaart thinks Joao Felix madeamistake joining Atletico Madrid. pic.twitter.com/6VtZJKmTAa — ESPN FC (@ESPNFC) February 3, 2020 နေမာ ။ ။ PSG […]
၄-၂-၂၀၂၀ အတွက် ညနေခင်း ဦးဦးဖျားဖျား အားကစားသတင်းများ
Twitter / Goal လမ်းပတ် ။ ။ လက်စတာအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ အသင်းရဲ့အဓိက ဂိုးသမား ကီပါ ကို ပွဲထွက်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့ လမ်းပတ်ကတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ အကျိတ်အနယ်ဆွေးနွေးနေရပြီလို့ Mirror က ဖော်ပြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဂိုးသမားအဖြစ် ပေါင်(၇၁.၆)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူထားခဲ့ဲ့ ကီပါ ဟာ အာဆင်နယ်ကို (၂)ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲက စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် လူစာရင်းကနေ ချန်လှပ်ခံခဲ့ရပြီး အသင်းရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့က လမ်းပတ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ Kepa Arrizabalaga is not liked by Frank Lamlard and is unlikely to be the starter for the rest […]
Twitter / Mirror ဖာနန်ဒက်စ် ။ ။ မန်ယူအသင်းဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ စပို့တင်းကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်စ်ကို (၅)နှစ်ခွဲ စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်လိုက်ပါပြီ။ မန်ယူဟာ အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်လူအတွက် ပေါင်(၆၇.၈)သန်း သုံးလိုက်ရပြီး (၂၀၁၅)ခုနှစ်ကတည်းက ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေမှုဟာ ဒီနေ့အချိန်မှာမှ အောင်မြင်သွားခဲ့တာပါ။ မန်ယူအသင်းဟာ ဖာနန်ဒက်စ်အတွက် ကနဦးပေးချေငွေ ပေါင်(၄၆.၆)သန်းသာ ပေးခဲ့ရပြီး ကစားသမားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်လို့ ကျန်တဲ့ ငွေပမာဏကို ပေးချေသွားရမှာပါ။ မိုနာကို ။ ။ မိုနာကိုအသင်းဟာ ဘော်ဒိုးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား အူရီလီယန် ကို (၄)နှစ်ခွဲ စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၂၀)အရွယ် ကစားသမားလေးဟာ ပြင်သစ်ရဲ့ ထွန်းတောက်လာမယ့် ကြယ်ပွင့် လို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူဖြစ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေးအသေးစိတ်ကိုတော့ […]
၃၁-၁-၂၀၂၀ အတွက် ညနေခင်း ဦးဦးဖျားဖျားအားကစားသတင်းများ
Twitter / Goal ဖာနန်ဒက်စ် ။ ။ မန်ယူအသင်းကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖာနန်ဒက်စ်က သူ့ရဲ့နိုင်ငံအသင်းဖော် ရော်နယ်ဒို တစ်ယောက် မန်ယူမှာ ကစားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကတည်းက မန်ယူအသင်းအတွက် ကစားပေးချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာခဲ့မိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ ပေါ်တူဂီမှာ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အတူတွဲဖက်ကစားခွင့်ကို ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ရော်နယ်ဒိုရဲ့အသင်းဟောင်း မန်ယူအသင်းဆီရောက်ရှိလာတာပါ။ ဖာနန်ဒက်စ်က သူ့အနေနဲ့ မန်ယူအသင်းကို အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဆုဖလားတွေဆီ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ Can’t wait for this celebration in OT pic.twitter.com/OUGrtxcgp1 — വുഡ്‌വാർഡിന്റെ തന്ത (@FarhanM59807574) January 31, 2020 အဲဗာတန် ။ ။ အဲဗာတန်အသင်းဟာ […]
၃၀-၁-၂၀၂၀ အတွက် မနက်ခင်း ဦးဦးဖျားဖျား အားကစားသတင်းများ
Twitter / Mirror မန်ယူ ။ ။ မန်ယူအသင်းဟာ မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင်းဖလားပြိုင်ပွဲ၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်၊ ဒုတိယအကျော့မှာ မန်စီးတီးကို (ဝ-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ပထမအကျော့က အရှုံးရလဒ်ကို ပြန်လည်ချေပနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် ဗိုလ်လုပွဲတက်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးက အဓိက ကစားသမား တော်တော်များများကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် (၃၅)မိနစ်မှာတင် မာတစ် ရဲ့ ဂိုးနဲ့ မန်ယူအသင်း ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ပွဲချိန် (၇၆)မိနစ်မှာတော့ မန်ယူကွင်းလယ်လူ မာတစ် (၂)ဝါတစ်နီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရလို့ မန်ယူအသင်း (၁၀)ယောက်တည်းနဲ့ ကစားခဲ့ရပြီး ပွဲအပြီးမှာ (ဝ-၁)နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပထမအကျော့ပွဲစဉ်တုန်းက (၁-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့လို့ ဗိုလ်လုပွဲတက်ခွင့်ကိုတော့ မန်ယူအသင်း ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းကတော့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဗီလာအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာပါ။ […]
၃၀-၁-၂၀၂၀ အတွက် ညနေခင်း ဦးဦးဖျားဖျား အားကစားသတင်းများ
Twitter / Goal ဘာစီလိုနာ ။ ။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ပေါ်တူဂီရဲ့ ရော်နယ်ဒို လက်သစ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားလေး ထရင်ကာအို ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ Mirror က ဖော်ပြပါတယ်။ ပေါ်တူဂီကလပ် ဘရာဂါအသင်းရဲ့ အသက် (၂၀)အရွယ် ကစားသမားလေးကို ဘာစီလိုနာက ပေါင်(၁၇)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူချင်နေတာဖြစ်ပြီး ဆွာရက်ဇ်ရဲ့နေရာကို အစားထိုးဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။ နဗီးလ် ။ ။ မန်ယူအသင်းနောက်ခံကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီနဗီး က မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်အပြင် နောက်ထပ် ကစားသမားတွေ ခေါ်ယူသင့်သေးတယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကို အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် နောက်ထပ် ကစားသမားသစ်တွေ ဆက်လက်ခေါ်ယူသင့်သေးကြောင်းနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကို အားဖြည့်သင့်သေးကြောင်း နဗီးလ်က တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ Manchester United […]
၂၉-၁-၂၀၂၀ အတွက် မနက်ခင်း ဦးဦးဖျားဖျား အားကစားသတင်းများ
Twitter / Mirror ဝုဒ်ဝါ့ဒ် ။ ။ မန်ယူအသင်းအမှုဆောင်ချုပ် အက်ဒ်ဝုဒ်ဝါ့ဒ်ရဲ့ ချက်ရှိုှုင်းယားက နေအိမ်ဟာ မန်ယူအသင်းပရိသတ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ “The Men in Black” လို့ အမည်ရတဲ့ မန်ယူပရိသတ်အဖွဲ့ဟာ အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းက ဝုဒ်ဝါ့ဒ်ရဲ့စံအိမ်အတွင်းကို မီးကျည်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကိုလည်း ဟစ်အော်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူဦးရေ (၂၀)ကနေ (၃၀)အတွင်းရှိတဲ့ လူအုပ်စုဟာ ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူမှု၊ စီမံခန့်ခွဲပုံညံ့ဖျင်းမှု စတဲ့အသင်းရဲ့အခြေအနေတွေကို ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ခြံဝင်းအုတ်တံတိုင်းနံရံတွေမှာလည်း မှုတ်ဆေးဗူးတွေနဲ့ စာတွေရေးသားသွားခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ အသက်(၄၈)နှစ်အရွယ် ဝုဒ်ဝါ့ဒ်၊ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ ကလေးနှစ်ဦးကတော့ အိမ်ထဲမှာ ရှိမနေကြပဲ အပြင်ရောက်နေခဲ့ကြတယ်လို့ Mirror က ဖော်ပြပါတယ်။ မန်ယူ ။ ။ […]